Wikipedia:Introduction - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Gpedia:Introduction)
Hordhac Baro sida wax loo bedelo Aqoontaada ku darso Gpedia Daadihin
Waa maxaay Gpedia?
Guji "Wax ka bedel xogta" si aad maqaalka u bedesho
Halkaan ka baro dedelka sida loo sameeyo
Gpedia (loogu dhawaaqo ˌwiˑkiˈpidi.ə). Waa bar laga helo Web-ka oo ah Qaamuus qoran. Waxaa qorey dad iskood ugu qora luuqadahooda oo aan dawlad ama haayadi diran. Qofkwalba oo guriga khatka internetka ku heysta, yaqaanana sida loo isticmaalo wuu ka qeybqaadan kaaraa Qaamuuskan oo sidii cilmi Soomaaliga ku qoran loo soo gelin lahaa halkan. Arintan oo la bilaabay 2001 Ingiriiskuna (english) ugu horeysey ayaa waxaa ku xigey luuqado badan oo kuwa ugu waaweyn ay yihiin Jarmal , Faransiis , Isbanish iyo Talyaani.
Sidee uga qayb qaadan kartaa
Waxba haka baqan – qof kasta wuxuu wax ka bedeli karaa bog kasta, waxaan kugu dhiiri galinaynaa ha baqin!
Iska ilaali – Gpedia maaha meel qabiilada sida ay ukala baxaan lagu qoro ama shaqsi lagu amaano waa meel ensaykolobediaya ah oo laga yaaba in ay wax ka aqristaan dadyoow farabadan oo mid kastaba uu macluumaad ka raadiyo.
Maxaad iskugu dayi la'dahay inaad wax ka bedesho?
Guji halkaan si aad wax uga bedesho sandbox, halka wax lagu tijaabiyo. (.)
guji Itus horfiirinta si aad utijaabisid wixii aad bedeshay, ama Bogga kaydi markaad dhamaysid qorista.
Ku xiga: Baro sida wax loo bedelo →
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gpedia:Hordhac&oldid=163393"